🥇 ▷ Caawiyaha Google sidoo kale wuu iskaan karaa wajigaaga ✅
Caawiyaha Google sidoo kale wuu iskaan karaa wajigaaga
Kaaliyaha Google wuxuu si cad u kordhayaa jiritaankiisa Android. Markasta oo aad heshid muuqaalo dheeri ah, sida awood u lahaanshaha akhrinta farriimaha dalabka haddii aan weydiisano. Sidaa darteed, maahan wax la yaab leh in aan mar horeba ka shaqeyneyno howlo cusub, taas oo mid ka mid ah horay loo muujiyay. Sababtoo ah sida ku xusan daadinnada cusub, kaaliyaha ayaa iskaan-qaadi kara wajigaaga.
Waa hawl laxiriirta soosaarista Nest Hub Max, af-hayeenka shirkadda ee leh kamarad iyo shaashad. Munaasabadda daahfurka, oo umuuqata mid dhow, waxaa lagu soo bandhigi doonaa Google Assistant.
Waa howl u eg sida Voice Match, kaliya kiiskan marka loo eego wejiga isticmaalaha yiri. Xaqiiqdii, mar hore ayaa lagu arkay xaaladaha qaarkood, sida qaabeynta Google Assistant Match, Codka Cuntada iyo Koontaroolka Guriga ayaa u muuqda. Marka hawshani si dhakhso ah ayaa loo qaban doonaa.
Fikradda ayaa ah markii ay jiraan wax kabadan hal isticmaale oo adeegsada aaladdaan, kaaliyaha ayaa ogaan doona wejiga ka dibna bixi macluumaad ku filan qofkaas. Sidaas awgeed ayaa loo soo bandhigi doonaa shaqadan iskaanka ah ee wajiga.
Hest Hub Max ayaa ku billowda toddobaad gudihiis gudaha Mareykanka. Hadda waxay ku jirtaa qaybta Ingiriisiga ah ee Kaaliyaha Google halkaas oo lagu arkay shaqadan. In kasta oo aan shaki ka qabin in sidoo kale mustaqbalka lagu bilaabi doono Isbaanish, malaha waxay la mid tahay bilawga hadalka af-hayeenka ee Isbaanishka.
Nasiib darrose, ma jiraan taariikho tan loogu talagalay. Tan iyo markii la soo bandhigay bishii May ee Google I / O 2019 waxba lama oga. Marka waa inaan sugnaa illaa inta laga ogaanayo sii deyntoodan iyo soo bandhigiddan shaqadan oo ah nooca Isbaanishka ee Google Assistant. Waxaan isha ku heyn doonaa wararka shirkadda.